“Eny, mozika, dihy, kolontsaina ny olona Afrikanina, fa mpamorona fahalalana ihany koa” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2018 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Français, English
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny vahoaka mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka azy ireo na lohahevitra misy fiantraikany amin'izy ireo. Ny tantara matetika mampifantoka ny fandinihan'ireo olona isoloan'ny hafa tena fa tsy avy amin-dry zareo ao amin'ny fampahalalam-baovao. Amin'ny alalan'ny famoronana zavon-teny mampiasa ny sehatra Media Cloud izay mikaroka angona media avy amin'ny faritra iray manokana eto izao tontolo izao, afaka nandinika sy nanadihady izany fisoloantena izany ireo mpandray anjara ary namaly avy amin'ity tantara nomerika ity. Ny tetikasa dia ahafahana manome sehatra hiandrandrana ny fomba ahafahan'izy ireo manome endrika ny fisolontenany amin'ny media amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Jaqueline Gallegos dia mpikambana ao amin'ny Afro Comunicaciones, fikambanana miasa ao amin'ny faritra Quito, Muisne, Carchi-Imbabura izay mamorona vokatra an-tsoratra sy horonampeo ary horonantsary momba ny fahalalan'ny vahoaka Afro-Ekoadaoriana. Ity manaraka ity ny dikantsoratry ny horonantsary etsy ambony.
Nisafidy ny “taranakafrikanina” aho. Inona no mahagaga ahy momba izany zavonteny izany? Ao an-tampony, ny teny hoe “taranakafrikanina” dia mifamatotra amin'ny kolontsaina, ny fisehoan-javatra, sa tsy izany? Saingy amin'ny farany, afaka mahita fahalalana, fampianarana sy fampandrosoana isika. Izany dia mampahafantatra antsika ny fomba fijerin'izy ireo antsika, saingy eny, mozika, dihy, kolontsaina ny olona afrikanina, saingy mpanome fahalalana siantifika lehibe ihany koa izy ireo, sy mpamorona fahalalana, saingy tsy hita izany na hita fa any amin'ny farany [amin'ny zavonteny].
Ireo teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra 116 nivoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy volana Aprily 2018 ary nahitana ny hoe “afrodescendiente” (taranakafrikanina) tao anatin'ny angon'ny Media Cloud tamin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro.
Ahoana no hisoloan-tena ny vahoaka taranaka-Afrikana ao amin'ny haino aman-jery Ekoadaoreana?
Tsy hita maso ny tolona nataon'ny vahoaka. Sady tsy voalaza no tsy voarakitra ny zavatra rehetra lazaina sy ataon'ny Vahoaka Afrikanina. Tsy ny vahoaka Afrikanina ihany no mainty hoditra manao fanatanjahantena na mandihy. Ny vahoaka Afrikanina dia mpamorona fahalalana, kolontsaina manana endrika sy fisehoany manokana any amin'ny faritra maro.
Ahoana no tokony hisoloana tena ny vahoaka taranaka-Afrikanina any amin'ny haino aman-jery Ekoadaoreana?
Tsy maintsy avy amin'ny kolontsain'izy ireo, tsy maintsy avy amin'ireo harena izay manome anao koa sy mamantatra anao fa samihafa sy isan-karazany ny fisoloantena. Ka tokony hanatsara izany ianao, tsy tokony ho ireo zavatra ireo no mampihataka anao, fa ny mifanohitra amin'izany, manampy anao izany.
Inona ireo voambolana tokony hipoitra amin'ny zavon-teny ho an'ny vahoaka taranaka-Afrikanina?
Ireo teny, “tolona,” “zava-bita,” “vehivavy”, “ankizy” dia tokony hiseho avokoa. Fandraisana anjara natao na manohy mametraka tantara tsy avy amin'i Ekoadaoro ihany, fa avy amin'izao tontolo izao koa ny teny momba ny renibentsika, ny lehilahy, ny “fanatanjahantena”, ary ny “siansa famotopotorana”.
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina tamin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa natao ny 21 aprily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny tokony atao mba ho voasolotena amin'ny haino aman-jery Ekoadaoreana izy ireo ary hampijoro tantara ho setrin'izany.
Nanampy tamin'ny fandikana ireo tsonganteny i Eduardo Avila.
14 ora izayVenezoela